Sat, Feb 27, 2021 | 16:11:34 NST
काठमाडौं, जेठ १६ – प्रदेश नम्बर २ मा फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फिर्ता लियो ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको सडक विस्तारका लागि तोकिएको मिति बुधबार सकिएको छ ।
सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
खप्तडमा लाग्ने गंगा दशहरा मेला तस्बिरमा
सात नम्बर प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तडमा लाग्ने गंगा दशहरा मेला आज लाग्दै छ ।
जेठ ९ – २०१८ को आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सको यात्रा टुंगिसकेको छ ।
तपाईं हिजोआज वीर अस्पताल पुग्नुभएको छ ? पुग्नुभएको छ भने तपाईंले पक्कै पनि वीर अस्पतालको रुप फेरिएको पाउनुभएको होला ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु जति छन्, ति मिलेका भन्दा धेरै फुटेको इतिहास छ । त्यसैले भनिन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीहरु सकभर मिल्दै मिल्दैनन् । मिलिहाले पनि लामो समय मिलेर बस्न सक्दैनन् ।
बर्दियामा झण्डै २ हजार किसानले गरे नहर सफाई
किसानले श्रमदान गरेर बर्दियाको बबई सिंचाई आयोजनाको नहर सफाई गरेका छन् ।
​विश्वप्रकाश, गगन र धनराज भन्छन् : कम्युनिष्ट एकता कांग्रेसका लागि ‘इमर्जेन्सी काल’ जस्तो
नेपाली कांग्रेसका कान्छो पुस्ताका नेताहरुले कम्युनिष्ट एकताले आफ्नो पार्टीलाई पनि रुपान्तरणको अवसर ल्याइदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाको दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ राख्नु कागको पखेटामा मयूरको प्वाँख हालेजस्तै हो : डा. भट्टराई
बाहिर कम्युनिष्ट ब्राण्ड र खोल उहाँहरुले प्रयोग गरे पनि अन्तर्यमा उहाँहरुले त्यो विचार धेरै पहिले नै छोडिसक्नुभएको छ ।
काठमाडौं, जेठ ३ – नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा जुटभन्दा फुटको अभ्यास धेरै छ । ६९ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रायः जसो टुटफुट, गुट र कहिलेकाहीँ एकताका शृङ्खलाबाट गुज्रँदै आएको छ ।
​पोखराका मेयरको उद्घोष – स्मार्ट सिटीको अनुभूत गर्न अब दुई महिना मात्रै कुर्नुस्
पोखराका सबै वडाबाट असार मसान्तदेखि अनलाइनमार्फत् सेवा दिने घोषणा गरिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको पनि सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । चुनावपछि नागरिकले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पाए । आफ्ना समस्या सुनाउने आफ्नै प्रतिनिधि पाए ।
‘मैले आफूले आफैलाई अंक दिनुपर्यो भने ५० अंक पास मार्क भए ६० अंक मात्रै दिन्छु’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले आफ्नो कामको आफैं मूल्यांकन गर्दै यसो भन्नुभयो ।
गएको चैत ११ गते मुग्लिन–नारायणगढ सडक अवलोकनको क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भन्नुभएको थियो ‘वैशाख १५ गतेपछि देशका कुनै पनि सडकमा खाल्डा हुने छैनन्, सडकमा खाल्डा देखिए मलाई फोन गर्नु ।’
​किन राखियो बबितालाई १२ वर्षदेखि फलामको जन्जिरमा ?
सप्तरी, वैशाख ३१ – सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ रञ्जीतपुरमा २८ वर्षिया बबिता यादवलाई विगत १२ वर्षदेखि फलामको जन्जिरमा बाँधिएर राखिएको छ ।
दाइजो नलिई विवाह गर्दा कोही सम्मानित त कोही पीडित
अहिले पनि महिलाले दाइजो नल्याएका कारण जिउँदै जलाउने, एसिड् छ्याप्ने, मानसिक रुपमा यातना दिने, घरबाट निकालिने जस्ता थुपै समस्या भोगिरहेका छन् ।
मुक्तिनाथमा मोदीको फरक–फरक अन्दाज
नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज बिहान मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेशमा सहज ‘इन्ट्री’ भएको छ । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न जनकपुर पुगेसँगै उहाँको मधेसमा सहज ‘इन्ट्री’ भएको हो ।
मोदीलाई स्वागत गर्न तयार जनकपुर : १ सय १ साधुको शंखनाददेखि १ सय २१ किलोको मालासम्म
धनुषा, वैशाख २७ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न जनकपुरधाम तयार भएको छ ।
​मोदीको स्वागतमा चिटिक्क सभागृह (तस्बिरसहित)
काठमाडौं, वेशाख २७ – काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा रहेको राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा नेपाल र भारतका झण्डा फहराइरहेका छन् ।